Xisbiga ANC Oo Shirkii Ugu Dambeeyay ka Yeelanaya Mustaqbalka Madaxwayne Jacob Zuma. – Heemaal News Network
Xisbiga ANC Oo Shirkii Ugu Dambeeyay ka Yeelanaya Mustaqbalka Madaxwayne Jacob Zuma.
Hoggaamiyaasha xisbiga Koofur Afrika ee ANC ayaa yeelanaya kulan lagu go’aansanayo mustaqbalka Madaxweynaha Koofur Afrika Jacob Zuma.
Guddiga fulinta ee xisbiga ANC ayaa suurtogal ah inay weydiistaan Jacob Zuma inuu xilka ka dago sida ay sheegayaan saxafiyiin ku sugan wadanka Koofur Afrika.
Madaxweynaha Xisbiga ANC Cryil Ramaphosa ayaa qirey in arrinta hogaamiyihii hore ee Koofur Afrika Jocob Zuma ay abuureyo midnimo la’aan.
Mr Zuma oo 75 sano jir ah ayaa wajahaya eedeymo ah inuu ku dhaqmay musuqmaasuqnimo kadib sagaal sano oo uu hayay talada wadanka Koofur Afrika.
Kulanka oo ka dhacaya pretoria ayaa waxaa ka qeybgalaya 112 xubnood oo ah guddiga fulinta waxaana ay ka tashanayaan sidii laga yeeli lahaa hogaamiyihii hore ee xisbiga ANC oo haatan haya talada wadanka Koofur Afrika.
Hoggaamiyaha cusub ee xisbiga ANC Mr Ramaphosa ayaa u sheegay boqolaal taageerayaashiisa ka mid ah kuwaasoo u dabaaldegayay dhalashada sanad guurada boqolaad ee aasaasihii xisbiga ANC Nelson Mandela.
Waxaa laga sugayaa Xubnaha Guddiga Fulinta ee xisbiga ANC in ay go’aan ka gaaraan caawa madaxweynaha dalka Koofur Afrika Jacob Zuma.
Wasiirka Caafimaadka Oo Magacabay Isku-duwayaasha & Agsimayasha Gobolada Somaliland.
Madaxweynihii Hore Oe Koonfur Africa Jacob Zuma Oo La Maxkamadeynayo.
March 27, 2018 Caalamka
Madaxweynihii hore ee dalka South African Jacob Zuma ayaa looga yeeray maxkamad si uu u wajaho 6-da bisha April dacwad isaga ka dhan ah oo la xiriirta musuqmaasuq,booliska ayaa sheegay in warqada u yeerista Zuma […]
South Africa:-Tirada Qasaaraha ka Dhashay Shil Tareen Oo Korodhay.
January 4, 2018 Caalamka
Tareen ay saarnaayeen dad rakaab ah ayaa waxaa qabsaday dab dalka Koonfur Afrika ka dib markii uu tareenka ku dhacay gaari weyn oo kuwa xamuulka ah. Waxaa ku dhintay shilkan 14 qof waxaana ku dhaawacmay […]
Baarlamaanka Dalka Koonfur Afrika Oo Doortay Madaxweyne Cusub.
Barlamaanka dalka Koonfur afrika oo kullan ku yeeshay magaalada Cape Town ayaa Cyril Ramaphosa u doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi. Madaxa cadaaladda ee dalkaasi Mogoeng Mogoeng ayaa ku dhawaaqay in Ramaphosa loo doortay madaxweynaha dalka, […]